Dhanieri 1 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Jerusarema rinokombwa nevaBhabhironi (1, 2)
Kudzidziswa kwenhapwa dzechidiki dzeimba yeumambo (3-5)
Kutenda kwevaHebheru vana kunoedzwa (6-21)
1 Mugore rechitatu rekutonga kwaMambo Jehoyakimu+ weJudha, Mambo Nebhukadhinezari weBhabhironi akasvika kuJerusarema akarikomba.+ 2 Nekufamba kwenguva, Jehovha akaisa Mambo Jehoyakimu weJudha muruoko rwaNebhukadhinezari+ pamwe chete nemimwe midziyo yemuimba* yaMwari wechokwadi, achibva aenda nayo kunyika yeShinari,*+ kuimba yamwari wake. Akaisa midziyo yacho munochengeterwa pfuma yamwari wake.+ 3 Mambo akabva audza Ashpenazi uyo aiva mukuru wemumuzinda make kuti auye nevamwe vaIsraeri kusanganisira vaya veimba yeumambo uye vemhuri dzinoremekedzwa.+ 4 Vaifanira kunge vari vechidiki vasina kana pakaremara, vane chimiro chakanaka, vaine uchenjeri, neruzivo, neungwaru,+ vachikodzera kushanda mumuzinda wamambo. Aifanira kuvadzidzisa mutauro wevaKadheya uye manyorerwo awo. 5 Mambo akarayirawo kuti vapiwe zvekudya zuva nezuva zvaibva pamachikichori aidyiwa namambo newaini yaainwa. Vaifanira kudzidziswa* kwemakore matatu, uye kana makore iwayo apera vaifanira kutanga kushandira mambo. 6 Pakati pavo paiva nevamwe vedzinza raJudha vaiti: Dhanieri,*+ Hananiya,* Mishaeri,* naAzariya.*+ 7 Mukuru wemumuzinda akavapa mazita* anotevera: Dhanieri akamupa rekuti Bheteshazari,+ Hananiya rekuti Shadreki, Mishaeri rekuti Misheki, uye Azariya rekuti Abhedhinego.+ 8 Asi Dhanieri akatsidza mumwoyo make kuti aisazozvisvibisa nezvekudya zvamambo newaini yake. Saka akakumbira mukuru wemumuzinda kuti amupe mvumo yekurega kudya zvinhu izvi zvaizomusvibisa. 9 Mwari wechokwadi akabva aita kuti mukuru wemumuzinda anzwire Dhanieri tsitsi nenyasha.+ 10 Asi mukuru wemumuzinda akati kuna Dhanieri: “Ndiri kutya ishe wangu mambo uyo akataura zvamunofanira kudya nekunwa. Ko akazokuonai maonda kupfuura vamwe vana vezera renyu? Mambo anozondipa mhosva.” 11 Asi Dhanieri akati kumunhu ainge agadzwa nemukuru wemumuzinda kuti achengete iye Dhanieri wacho, naHananiya, naMishaeri, naAzariya: 12 “Ndinokumbirawo kuti mumboedza vashandi venyu kwemazuva gumi, muchiita kuti tidye miriwo nekunwa mvura; 13 mozoenzanisa miviri yedu nemiviri yevamwe vechidiki vari kudya machikichori amambo, mobva maitira varanda venyu zvinoenderana nezvamuchaona.” 14 Saka akabvuma kuita zvavakakumbira, akavaedza kwemazuva gumi. 15 Pakapera mazuva gumi, vaitotaridzika zvakanaka uye vaiva neutano kupfuura vamwe vana vaidya machikichori amambo. 16 Saka muchengeti wavo aibvisa zvekudya zvekwamambo newaini yavaifanira kunwa achivapa miriwo. 17 Asi Mwari wechokwadi akapa vana ava, vari vana, uchenjeri neruzivo nenjere zvekuti vainzwisisa mabhuku ese; uye Dhanieri akabatsirwa kuti anzwisise zviratidzo zvese nehope.+ 18 Pakasvika nguva yakanga yataurwa naMambo Nebhukadhinezari kuti vana vacho vazounzwa,+ mukuru wemumuzinda akavaendesa kwaari. 19 Mambo paakataura navo, akaona kuti pavana vacho vese hapana akanga akaita saDhanieri, Hananiya, Mishaeri, naAzariya;+ uye vakaramba vachishumira pamberi pamambo. 20 Panyaya dzese dzavaibvunzwa namambo dzaida uchenjeri nenzwisiso, mambo akaona kuti vaipfuura vapristi vese vaiita zvemashiripiti nen’anga+ dzaiva muumambo hwake hwese zvakapetwa kagumi. 21 Dhanieri akaramba ari ikoko kusvikira mugore rekutanga raMambo Koreshi.+
^ Kana kuti “yemutemberi.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “kupiwa zvekudya.”
^ Kureva kuti “Mutongi Wangu ndiMwari.”
^ Kureva kuti “Jehovha Aratidza Nyasha.”
^ Zvichida rinoreva kuti “Ndiani Akaita saMwari?”
^ Kureva kuti “Jehovha Abatsira.”
^ Kureva, mazita ekuBhabhironi.